ဘယ်သူ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလဲ – Development for who? | MoeMaKa Burmese News & Media
One Response to ဘယ်သူ့အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလဲ – Development for who?
ThanPhaye on May 30, 2012 at 2:50 pm
ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ထိေ၇ာက်တဲ့ ကာတွန့် တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ပြောပြောနေတယ်၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု့ ပပျောက်ရေး၊တဲပေါ်ကတိုက်ပေါ်ရောက်ရေး၊အလုံးစုံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီအမြန်ဖော်ဆောင်ရေး၊ သမတသက်တမ်း၁နှစ်ကျော်ပြီး၊ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်တာဘာတခုမှမတွေ့ သေးဘူး၊ လတ်တလောတွေ့ နေ၊ကြားနေရတာတော့ လယ်ယာမြေသိမ်းစည်းရေးနဲ့နိင်ငံခြားထွက်လေ့ လာရေးပဲဖြစ်တယ်။အာဏာရပြီးတိုင်ပြည်တိုးတက်အောင်မကြံဆောင်ပဲနဲ့ပြည်သူ့ မျက်နာမကြည့် ပဲလက်ထဲအာဏာရောက်တာနဲ့ မျောက်အုန်းသီးရသလိုမိူးလုပ်နေကြတယ်။ တယောက်လာလည်းဒီပုတ်ထဲကဒီပဲ၊နောက်တယောက်လာလည်းဒီပုတ်ထဲကဒီပဲ ပဲဖြစ်နေတယ်၊ ပြောတဲ့ စကားတွေကလည်းရှေ့နောက်မညီ။တယောက်ကလည်းပိုတဲ့ လျှပ်စစ်ရောင်းတယ်။နောက်တယောက်ကလည်းဖယောင်းတိုင်လေးထွန်းပြီးမီးမိတ်ထားပါတဲ့ ။ဒီလိုကောင်တွေကိုသမတကတော့ ဖြုတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊လူထုအားနဲ့ ဝိုင်းဖြုတ်ကြ။